बाटो म्याद !/ युवराज नयाँघरे | Online Sahitya
'दिदी, जाँदा आधिघन्टा, फर्कंदा डेढघन्टा । यो मिलेन नि ! यति लामो बाटोलाई बराबरी हुनुपर्ने होइन र ?'
फटाफट लम्कँदै मैले सोधेको थिएँ ।
होइन रहेछ यो । मेरी दिदीको हैरानी र दगुरादगुर हेर्दा बाटो म्याद दिने नेतृत्वका कारणले परिणाम देखापर्दोरहेछ । समय छोट्याउन माइत जाँदा चाँडो र घर फर्कंदा उही समय गर्नु हुन्थ्यो दिदी ।
ब्ााटो म्याद पाएपछि जसरी नि पुग्नैपर्ने ।